Globs dzinokubatsira iwe: sei kudzima mafaera ese kunze kweumwe | Linux Vakapindwa muropa
Globs dzinokubatsira iwe: sei kudzima mafaera ese kunze kweimwe
ari maglobbs uye pombi yeUnix inobatsira kwazvo muzviitiko zvakawanda patinoshanda kubva kunyaradzo. Imi mese makashandisa pombi kana kushandisa mavara ane mukurumbira senge wildcard * kutsiva mazita, nezvimwe. Zvakanaka, zvirokwazvo ivo vakasanganawo nedambudziko rekuda kudzima mafaera ese mudhairekitori kunze kweimwe kana akawanda acho. Kana paine mashoma harisi dambudziko, rinogona kuitwa zvirinyore kunyangwe kubva graphical mode.
Asi kana paine akawanda uye isu tiri kushanda kubva pakoni zvinhu zvinowedzera kuomarara. Asi zvinongoitika nekuti hatina zviwanikwa, nekuti pane sarudzo dziri nyore dzatinogona kushandisa kutibatsira kushandura mabasa akaomarara kuita chimwe chinhu chiri nyore kwazvo. Zvakanaka, mune ino yakapusa dzidziso isu tinotsanangura maitiro ekuzviita izvo uchingoshandisa yakapusa chiratidzo ... Nyore, handiti? Zvakanaka, ngatiendei kunodzidzira:
Chekutanga pane zvese, ndiri kuenda kufungidzira kuti tinayo dhairekitori inonzi Mapikicha matiri kuda kudzima mafaera emifananidzo .jpeg ari mukati. Ngatifungei kuti pane zana mapikicha. Uye kuti isu tinoda kudzima zvese kunze kweumwe wavo anonzi nat100.jpg. Nhanho yekutanga kuenda kune iro dhairekitori nerubatsiro rweiyo cd yekuraira. Semuyenzaniso:
Ipapo isu tinoshandisa iyo rm yekuraira sezvatinowanzoita patinoda kudzima chimwe chinhu, asi isu ticharatidza kuti tinoda kudzima zvese kunze kweiyo pikicha iyo yatinoda kuchengeta, kune izvi isu tinoshandisa hunhu! zvakadai kuti:
rm -f !(nat7.jpg)
Nezvo isu tiri kuramba kubviswa ku rm kuti ibvise zvese kunze kwefaira rakanzi nat7.jpg. Kana iwe ukaenda kune dhairekitori uye woita rondedzero Zvemukati, iwe unozogona kuongorora kuti zvese kunze kwemufananidzo waunoda zvadzimwa:
Iye zvino unogona kutamba neiyi glob kuita zvimwe zvinhu, sekubvisa mafaera ese mudhairekitori kunze kweMP3 mafaera ane! (*. mp3) kana zvakare kuchengetedza akasiyana mafaera kana mafomati kubva pakubviswa, senge! (nat7.jpg | isa5.jpg) kana na! (* .txt | * .mp3). Mikana yakawanda ... Iyi Unix, iyi Linux!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Globs dzinokubatsira iwe: sei kudzima mafaera ese kunze kweimwe
Hapana zuva ratisingazodzidza chimwe chinhu! Kunyangwe paine chokwadi chekuti ndanga ndichivhiringidza maPC kweanenge makore makumi matatu uye angangoita makumi maviri neLinux, ini handina kunyatsopihwa koni, ndinobvuma kuti inobatsira zvakanyanya, asi ini ndagara ndiine husimbe kana zvasvika pakuchengeta mirairo uye fara kuenda kune graphical mode. Ini ndanga ndisingazive iyi sarudzo yemaglobbs zvachose uye kunyangwe zvaive zvisina kundiomera kuti ndirarame ndisipo, zvinofanirwa kupihwa kuti zvinotaridzika kunge zvinobatsira uye zvinoshanda, mukuwedzera, zviri nyore kunzwisisa uye kushandisa. Ini ndinonyora zvakanaka.
Ndatenda nemupiro wandisina kukahadzika unobatsira kwazvo.
Ndinokutendai zvikuru asi…
rm -f! (*. exe)
bash:!: chiitiko hachiwanikwe
Edza kumisikidza izvi:
shopt -s extglob; seti -H
Uye woedza zvakare:
Shuwiro yakanakisa! Ndinovimba zvinoshanda kwauri. Uye nekutenda nekutitevera ...
Mhoroi, ndine mubvunzo, ini handina kukwanisa kusevha mafaera maviri panguva imwe nekuti nekuti pandinoedza, zvese zvinodzimwa, asi pandinozviita neimwe chete, ndinogona. chingava chii? Ungazvigadzirisa sei?
kuvhuraSUSE Tumbleweed yatove neGnome 3.24
Maitiro ekudzivirira netsaona faira kubviswa muLinux